တပ်မှူးတပ်သား ပြောစကား - ဗွီအိုအေသတင်းဌာန
တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန် နံနက် ၅း၃၀-၆း၃၀တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန် နံနက် ၆း၃၀-၇း၀၀တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန် ညနေ ၆း၀၀-၇း၀၀တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန် ည ၉း၀၀-၁၀း၀၀ နံနက် ၅း၃၀-၆း၃၀နံနက် ၆း၃၀-၇း၀၀ညနေ ၆း၀၀-၇း၀၀ညပိုင်း ၉း၀၀-၁၀း၀၀ နေ့စဉ် တီဗွီသတင်းလွှာအပတ်စဉ် တီဗွီသတင်းလွှာဗွီဒီယိုသတင်း ကဏ္ဍစုံလင် / တပ်မှူးတပ်သား ပြောစကား 2013
နောက်သို့ Page doesn't contain any article. Link to latest data by clicking here. 2013
နောက်သို့ Calendar 2013
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် နဲ့ အမေရိကန် လွှတ်တော် အမတ်တွေတွေ့ဆုံ၊ သမ္မတရဲ့ အမေရိကန် ခရီးစဉ်အပေါ် သုံးသပ်ချက်၊ အမေရိကန်ရဲ့ ပိတ်ဆို့အရေး ယူမှု အပေါ် ပြည်တွင်းကုန်သည်တွေ သဘောထား၊ ပြည်တွင်း မီဒီယာတိုးတက်ရေးအတွက် စိန်ခေါ်အကဲစမ်းမှုများ ... စသည် ထိပ်တန်းသတင်းများ မြန်မာနိုင်ငံ ကလေးစစ်သား အသုံးပြုမှု ပပျောက်ရေး တိုးတက်မှုရရှိ မိတ္ထီလာအရေးအခင်း အစိုးရကိုင်တွယ်ပုံ ဒေါ်စု ဝေဖန် လေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခတ်အပြီး အသက်ရှင် ကျန်ရစ်သူတွေ ရှာဖွေနေဆဲ အမေရိကန် မြန်မာ ကုန်သွယ်ရေး သဘောတူညီမှု လက်မှတ်ထိုး သမ္မတဦးသိန်းစိန် အမေရိကန် လွှတ်တော် အမတ်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံ Oklahoma လေဆင်နှာမောင်း လူ ၅၀ ကျော်သေဆုံး အများဆုံးဖတ်ရှုသည့် သတင်းများ မိတ္ထီလာအရေးအခင်း အစိုးရကိုင်တွယ်ပုံ ဒေါ်စု ဝေဖန် သမ္မတဦးသိန်းစိန် အမေရိကန် လွှတ်တော် အမတ်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံ Oklahoma လေဆင်နှာမောင်း လူ ၅၀ ကျော်သေဆုံး အမေရိကန် မြန်မာ ကုန်သွယ်ရေး သဘောတူညီမှု လက်မှတ်ထိုး မိတ္ထီလာအကြမ်းဖက်မှု ပြစ်ဒဏ်များ ဆက်လက်ချမှတ်အများဆုံးအီးမေးပို့သည့် သတင်းများ Oklahoma လေဆင်နှာမောင်း လူ ၅၀ ကျော်သေဆုံးအများဆုံးကြည့်ရှုသည့် ဗွီဒီယိုသတင်းများ နေ့ စဉ်တီဗွီသတင်းလွှာ (၀၅-၂၂-၂၀၁၃) သမ္မတဦးသိန်းစိန် Johns Hopkins တက္ကသိုလ်ဟောပြောပွဲ ပိတ်ဆို့မှုနဲ့ မြန်မာ့စီးပွားရေး သမ္မတ ခရီးစဉ်အပေါ် အမြင်များ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မြန်မာတီဗွီသတင်း ကမ္ဘာ့သတင်း စက္ကန့် ၆၀ VOA60 World